Muuri News Network » SAWIRO: Axmed Madoobe oo Mas’uul sare Xilka ka qaaday Mid Cusubna magacaabay..(Magacyo)
SAWIRO: Axmed Madoobe oo Mas’uul sare Xilka ka qaaday Mid Cusubna magacaabay..(Magacyo)
Mar 13, 2016 - Comments off
Wararka laga helayo magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in xil ka qaadis lagu sameeyay taliyiihii Booliska maamulka Juba Col. Gaboobe Xasan Barre, iyadoo xilkaasina loo magacaabay Jen. Maxamed Axmed Dhuumaal.
Arrintan oo ku soo beegantay xilli ay waanwan nabadeed u socoto beesha Sade iyo Axmed Madoobe ayaa taliyaha cusub ee Jubbooyinka oo ka soo jeedo Beesha Sade uu hore u ahaa taliyaha ciidamada Jubbooyinka, ka horna wuxuu noqday taliye ka tirsan ciidamada Soomaaliya.
Dhinaca kale Maareeyaha cusub ee dekadda magaalada Kismaayo ayaa xilkii la wareegay kadib xaflad lagu qabtay Dekadda oo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubba C/qaadir Lugadheere, guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Jubba.
Maareeyihii hore ee xilka wareejiyay Cabdullaahi Dhubad Shiil Xadhuun ayaa sheegay in dekadda Kismaayo markii uu xilka qabtay ay ahayd mid howsheedu liidatay laakiin maanta ay ku soo xirtaan maraakiib iyo doonyo sida badeecado oo fara badan, haddana diyaar u yahay inuu xilka wareejiyo.